Efa nisy ny tomban’ezaka amin`ny fanavaozana atao mba ho tena andry iankinana amin`ny fampandrosoana io sehatra io. Misy fivoarana foana ny sehatry ny fananan-tany dia ny fanatsarana eo amin`ny lafiny lalàna, ireo fomba fitsinjarana sy fomba fiasan`ny fitantanana ny fananan-tany… Tsy mifarana akory ny fanovam-penitra (reforme) fa mitohy foana ary hatsaraina arakaraka ny fivoarana ny fampandrosana, hoy ny teo anivon`ny minisiteran`ny fanajariana ny tany (MAHTP). Efa natao ny tomban’ezaka nandritra ny PNF (programme national foncier), izay nivadika UCRSF. Amin`ity taona ity dia efa natsangana ny “Fond National Foncier” izay hanohy azy. Izany hoe ny vinan`ny fanjakana dia eo amin`ny lafiny famatsiam-bola dia tsy tokony ho olana intsony io reforme io, hoy ny tomponandraikitra. Miditra amin`ny dingana fanamafisana sy fanatsarana ny sampanan fananan-tany mandinika ny hitaritana izay fanovam-penitra amin`ny lavitr ezaka.